Ukondla iPuppy yeGold Retriever
NguNona K. Bauer
Ngaba i-prednisone ikwenza uchame kakhulu
Injana yakho yeGold Retriever inexesha elakhelweyo elimqhubela ekubeni atye kwishedyuli. Mnike ukutya kathathu ngemini kwiinyanga ezintathu zokuqala emva koko umtyise kabini ngemini ubomi bakhe bonke. Uninzi lwabafuyi kunye nabaqeqeshi abaziingcali bakhetha ukondla kabini-mihla le. Ngokuqinisekileyo, izinja ezininzi zitya kube kanye ngemini, kodwa ukutya okuncinci kuyanelisa, kukhuthaza ukulawula ubunzima obungcono, kwaye kunokuthintela ukudumba, sisizathu esivakalayo sisodwa. Ngaphezulu, inja yakho iya kucinga ukuba yinto enkulu yokufumana isitya sokutya kabini ngemini.
Abanye abantu banokukuxelela loo nto ukondla simahla, ikwabizwa kanjalo ukhetho olukhululekileyo, ilunge ngakumbi, kwaye kunjalo. Kodwa kunzima kakhulu ukuqhekeza intshontsho elisimahla-into engena ngamaxesha angaqhelekanga iya kuphuma ungalindelanga. Ukondla simahla kwenza ukuba kube nzima ukujonga isixa esidliwa yinjana yakho, nto leyo ebalulekileyo kukwanda okukhula ngokukhawuleza njengeGolden Retrievers. Kwaye ezantsi kwendlela, unokuba nengxaki yempilo efuna umgaqo wokutya ongqongqo.
Tyisa injana yakho ngo-6 ukuya ku-7 kusasa, kwakhona malunga nemini emaqanda, kunye nesidlo sangokuhlwa kungadlulanga u-5 okanye u-6 emva kwemini. Ukufumana uqeqesho olulula lwezindlu, musa ukumtyisa emva kwentsimbi yesithandathu. kwaye ungamniki amanzi emva kwentsimbi yesixhenxe. Mnike ityhubhu yomkhenkce ukuba ayihlafune xa enokunxanwa. Ngo-10 emva kwemini. uhambo oluya ngaphandle kufuneka lumhambise ubusuku bonke.
Uya kudinga ukutya kathathu ngemini iiveki ezimbalwa. Qala ukondla kabini ngemini xa emalunga neeveki ezili-11 okanye ezili-12 ubudala. Ubungakanani bokutya buya kwahluka ngenjana nganye, kodwa umndilili ophakathi wegolide kwiiveki ezisixhenxe upholisha malunga ne-1/3 ukuya kwi-1/2 yekomityi yokutya okomileyo kwisidlo ngasinye. Yondle yomile ngamanzi afumanekayo ecaleni. Ukondla okomileyo kuya kunceda ukukhusela i-plaque kunye nokwakha i-tartar emazinyweni akhe, kubaluleke kakhulu emva kokuba amazinyo akhe amadala ekulo.
Ezinye iinjana ziphantse zikuphefumle ukutya kwazo ngokungathi sisidlo sazo sokugqibela emhlabeni. Ukuyekisa inkqubo yokutya ukuya kwinqanaba elinempilo, ungabeka ilitye elicocekileyo, elikhulu elijikelezayo embindini wepani yakhe yokutya. Oko kuyakumnyanzela ukuba atye ngeenxa zonke kwaye anciphise isantya.
Tyisa injana yakho kwindawo enye yonke imihla ngaphandle kweziphazamiso njengabantwana neekati ukuze ikwazi ukugxila kwishishini lokutya. Vumela malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 kwisidlo ngasinye. Ukuba akayigqibi ngelo xesha, thatha ukutya kwakhe kwaye unike ukutya okufanayo kwisidlo ngasinye; sukufaka i-kibble eseleyo ukusuka kwisidlo sangaphambili ukuya kwesilandelayo.
Unokonyusa nini ukutya okwabelweyo? Xa egqibezela yonke i-kibble kwizidlo ezibini kwezintathu, qumka iinxalenye zakhe nje ngetadi. Zama ukusuka kwinqanaba elingu-1/3 ikomityi ukuya kwindebe ye-1/3 ekuqaleni, emva koko unyuke uye kwindebe encinci ye-1/2, emva koko ikomityi ye-1/2 yekomityi, ikomityi yokuqokelela, kwaye unyuse ileli yokutya ngokwenjana yakho ukutya
Eminye intshontsho litya ngokungakhathali kwaye likuginya ukutya ngokungathi sisidlo sabo sokugqibela, kwaye abanye batyebile kwaye kubonakala ngathi bayatyhafa ekutyeni kwabo. Ezinye iinjana nazo ziyahamba zityile kwaye ziya kutya ngamandla angaphantsi okanye kancinci ngamaxesha athile. Ungakhathazeki. Inkxalabo yakho yokwenyani kufuneka ibe yintshontsho etyebe kakhulu. Mgcine ethembele.
uyenza njani i-vicadin
iivithamini d 3 iziphumo ebezingalindelekanga
kwiipilisi ezingama-40 eziphakamileyo
Iziphumo ezibi sudafed pe